N’Oyo, ndị a na-eche na ha bụ ndị ọzụzụ ehi gburu mmadụ iri abụọ ma mụnye n’ọkụ n’obí eze
N’Oyo, ndị a na-eche na ha bụ ndị ọzụzụ atụrụ gburu mmadụ iri abụọ ma mụnye n’ọkụ n’obí eze
Echere ndị na-azụ atụrụ gburu ihe na-erughị mmadụ 20 bi na Igangan dị na Oyo Steeti n’ụtụtụ Sọnde, ndị akaebe gwara ndị Peoples Gazette.
A kọrọ na ndị oji egbe ahụ wakporo obodo n'etiti abalị, gbuo, merụọ ahụ, ma mesịa gbaa ụlọ ọkụ, gụnyere obí eze na ụlọ eze. ndo.
Ime ihe ike a mere ihe na-erughị otu izu mgbe onyeisi oche nke steeti Amotekun Corps, Ajibola Togun, dọrọ aka ná ntị na ụfọdụ ndị na-azụ anụ na-akpa nkata iji kpughee ụjọ na steeti isii dị na South-West.
Sunday Igboho, otu onye ndọpụ n'ike na-akwalite nkewa Yoruba na Nigeria, bi na obodo. Maazị Igboho mere mkpamkpa nso nso a n’obodo ahụ nke tinyere aka n’ime ihe ike. Ọ gọrọ agọ na ọ bụ ya kpatara nsogbu ahụ nke butere ọnwụ ọtụtụ mmadụ na mbibi nke ihe onwunwe.
Gọvanọ Seyi Makinde kwadoro mwakpo ahụ na Twitter n'isi ụtụtụ Sọnde, na-akpọ ya "ihe na-awụ akpata oyi" ma na-agba ndị bi ume ka ha nọrọ jụụ ka ezigara ndị ọrụ nchekwa iji weghachi usoro.
Tunji Omolewu, onye bụbu onye ndụmọdụ nke Igangan, gwara Vanguard na ọ gụrụ ozu iri abụọ.
“Anatara m oku ahụ mgbe obere oge gachara elekere iri na otu mgbede Anyị na-alaghachi Ekiti, ebe anyị sonyere na nnọkọ maka mba Yoruba. Abịara m Ibadan n’abalị iri na abụọ nke ụtụtụ, mgbe oku ndị a na-aga n’ihu, ekpebiri m ịla. Agụrụ m ihe karịrị mmadụ 11, "ọ gwara ndị Lagos kwa ụbọchị. “A gbara ụlọ eze anyị ọkụ. Ọkụ gbagbukwara ụlọ ọrụ na-ejupụta mmanụ dị na Adolak.
Dị ka otu onye bi na ya si kwuo, ndị mwakpo ahụ rutere elekere 11:00 nke mgbede na ọgba tum tum iri abụọ wee malite ịpị egbe na egbe.
Yemi Akinlabi, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ n’obodo ahụ, kwukwara, sị: “Ọ na-agbawa obi. Ndị anyị natara ozi ọgụgụ isi naanị ụbọchị ole na ole gara aga wee ziga ya na mpaghara kwesịrị ekwesị maka ime ihe, mana lee anyị bụ taa. Anyi aga anogide na-atu egwu na obodo anyi?
"Agwara m General Toogun banyere ihe mere n'abalị ụnyaahụ, anyị ga-achọ ịhụ ka ya na ndị otu ya na-eme ihe." A gaghị ekwe ka ndị anyị nyere onwe ha aka.
Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na Ibadan azaghị ozugbo maka arịrịọ maka nkọwa maka mwakpo a.
Ala Yoruba: Ndị uwe ojii nwudoro ndị ngagharị iwe n’ihu ụlọ eze Alake Nwere ike 2, 2021
Otu ndị ọzụzụ atụrụ si wakpo obodo ndị Taraba ma gbuo ndị bi ebe ahụ ka ha na-arahụ ụra Nwere ike 29, 2021
Ndị na-azụ atụrụ: Ahmad Lawan, ndị omeiwu ndị ọzọ chọrọ nchekwa data maka ehi April 21, 2021
Ndị ọrụ ehi nọchibidoro ndị ọrụ ugbo Tiv nke Nasarawa April 29, 2021
Tags:ndo, ndị na-azụ atụrụ, makende, seyi makinde, Sunday igboho